UJUSTIN TIMBERLAKE: I-FUTURESEX / LOVESOUNDS UPHONONONGO LWEALBHAMU - IINDABA
Ixesha elizayoSex / LoveSounds
I-pop star ibonelela nge-albhamu yayo enamabhongo, enkulu kakhulu: iphantse yaveliswa yiTimbaland- kunye nehip-hop ethe kratya kunangaphambili - icwecwe liyayishiya imvakalelo yokuzivavanya apho iiNeptunes zathengisa khona ngokukhawuleza, Icacisiwe , kodwa iyenzela yona ngobubanzi bonyana wayo owamkelayo.
Njani ukuba uJustin Timberlake abile kwaye azinze ngenxa yokulandela ityala lakhe, Icacisiwe : Njenge-albhamu yayintle nje, kodwa yayihonjiswe ngamaculo amane angacacanga kangangokuba amenza omnye weyona mifanekiso iphambili yeshumi. Ngokwemithetho yomdlandla elawula umculo wepop, nayiphi na enye indlela enokuthi ibe luphawu olumhlophe okanye i-hubristic monstrosity. Kunye Ixesha elizayoSex / LoveSounds ngokungaguqukiyo ukhetha le yokugqibela.
Ukuba Icacisiwe yaxelwa ekuhleni Ukusuka emadongeni , Ixesha elizayoSex / LoveSounds 'iimpembelelo ziyi-panoramic engakumbi: Kwimeko yokunciphisa, iyavakala Iyonwabisa -ukulandela ukulandelwa kwesitayile, istilier kunye nesini kunye ne-neurotic ngakumbi kunangaphambili, kodwa ngokubanzi icwecwe likhumbuza iPrince- hayi kuphela i-funk-pop Imvula emfusa , kodwa kunye nokugqwesa okukhulu kweNkosana kule minyaka ingama-20 idlulileyo. Akukho nto ifunyenweyo (kwaye ihlala ilahleka) xa umculo wepop uzigqogqa kwimibono yobugcisa kunye namabhongo, kodwa noJustin, ngokugqwethekileyo, yintoni emenza ukuba abe yinkwenkwezi elungileyo: NjengoChristina Aguilera, ukuzithemba okukhulu kunye I-stylistic metamorphoses ibonelela ngomboniso onamaphepha ngaphezulu kokukhubeka kwaye wongeza ubumnandi kwimpumelelo yakhe.
Phantse iveliswe yiTimbaland- kwaye nangomda obalaseleyo wehip-hop kunangaphambili - icwecwe liyayishiya i-shegood sheen ethi i-Neptunes ithengise ngayo Icacisiwe , kodwa iyenzela yona ngobubanzi bokwamkela kwayo ngoonyana, kunye noTimbaland evusa uninzi lwezona zixhobo zakhe zisebenza kakuhle, ukusuka kwi-funk eyenziweyo yerabha ukuya kwi-pseudo-crunk blare to eerie Eastern opulence. Kuzo zonke iindawo, ii-grooves zichazwe ngamandla azo omculo: Kukuqina kwe-synth riffs kunye nemitya yokubhabha ematyotyombeni ebambe ingqwalaselo yakho, hayi ukubetha okanye ukubetha kwesandi-nangona ezi, nazo zininzi.
Apha, uTimberlake uphakamisa umbono awamkeleyo kwityala lakhe, ngandlela thile bobabini bagqibezela isithandwa sabo kwaye baswele ngamandla. Kwi-hyperactive yesibini engatshatanga ethi 'Uthando lwam' isindululo sakhe sesini rhoqo kwisicelo, ngokungathi nantoni na engaphantsi komtshato ayifanelekanga ukuba icingwe. Kwangokunjalo, umkhondo wethayitile oqaqambileyo - omi phakathi kweentambo zentsimbi yee-Inch Nails '' Closer '(kakuhle, iivesi zayo) kunye ne-machochistic flutter yeJunior Boys- ifumana umtsalane kwiminqweno yayo ephakamileyo, njengomthandi oqhelekileyo ukugculela ukukhohlisa okuthe kratya. Kukugqithisa kwamabhongo okuphumelela, ngokuchasene nakuphi na ukungqinelana okwenyani, okwenza Ixesha elizayoSex / LoveSounds ngaphezulu kwe-albhamu kune Icacisiwe wayenjalo. Iingoma ezivakala ngokungathandabuzekiyo ngokuzonwabisa wedwa-ngokucacileyo, ukubhengeza, ukubetha ngokungathandabuzekiyo wokuqala ongatshatanga 'SexyBack' - zinxitywe ngamandla anyanzelisayo kunye nenjongo xa zidlalwa ngokulandelelana.
Eyona nto ibalaseleyo, i-disco e-disco-eqhotyoshelweyo ye-'LoveStoned 'yehla ngokungxama kwindawo entle yokuncwina ethi' Ndicinga ukuba uyazi ', yonke ikatala ye-MOR-rock kunye nemitya engenabunzima, ikwayari enye (' Undithandile ngamatye ... kwaye ndicinga ukuba uyazi ') itshintshiwe ukusuka kwintabatheko yaya kulwamkelo lwe-paranoid kunye ne-elegiac yomlutha. Oku kungazi (okanye, kunoko, ukuzithemba) kwizenzo zomculo eziphakathi kweyona nto inomdla kwi-albhamu; Nditsho neqela leebhaladi ezinobumuncu ziyancomeka ngenxa yokungazibambi okanye ulungelelwaniso - ngakumbi, isimilo sokuziphatha esinevangeli esithi 'Ukulahleka kweNdlela yam', enamazwi apholileyo, ngandlel 'ithile iyintlekele enkulu kwaye iyathandeka ngokunzulu. Amanyathelo anjalo abambalwa, kodwa kukwakho nesiqwenga esifanelekileyo sale albhamu: Ngokwenza intlekele ngaphandle koloyiko, ukufikelela kukaTimberlake kwenza umculo wakhe ubenomtsalane- nokuba ungaphaya kokuqonda kwakhe.
I-nas hip hop ifile
Keisha cole ingoma entsha
Ingoma ephezulu ngo-2014
uhlaziyo kwi-bobby shmurda
ithuba lokuba i-emmys yomrepha
soilder uthando ngoku